Standard Business Cards - PromoSALE!
Deluxe Business Card
Label StickersHot Sales!
Paper Label Sticker - Promo
Covid 19 Floor Sticker-01
Covid 19 Caution Sticker-02
Covid 19 Caution Sticker-03
Covid 19 Caution Sticker-04
Covid 19 Caution Sign Board-05
Covid 19 Floor Sticker-06
Covid 19 Caution Sticker-07
Covid 19 Caution Sticker-08
Covid 19 Caution Sticker-09
Covid 19 Caution Sticker-10
Covid 19 Caution Sign Table Top-11
Aluminium Lightbox (Customize Size)
Tripod Display Stand
Stickers - ReadyMade
Baked with Love Sticker Set
J Flag Stand
Canvas Printing with Frame
Pattern Canvas Frame Set
Metal UV Print
1mm PVC Rigid Printing with Sticker
0.5mm PVC Rigid Printing with Sticker
All in one Board Printing with Sticker
Foam Board Printing with Sticker
PP Board Printing with Sticker
သင် Artwork File များပြင်ဆင်ရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်အထောက်အကူပြုစေရန် အတွက် Artwork Guideline ကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။တစ်ချို့သောပြဿနာများအတွက်အောက်ပါ guideline တွင်မပါဝင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။သေချာမပြင်ဆင်ထားသောမှားယွင်းသည့် Artwork File များကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်နောက်ကျမှုများရှိစေနိုင်သည့်အတွက်သေချာစွာပြင်ဆင်ပေးစေလိုပါသည်။
Page Layout များမှန်ကန်နေရန်
Linked လုပ်ထားသောဖိုင်များ၊ပုံများ၊ Font များအားလုံးသီးခြား Folder တစ်ခုတွင်ပါရှိနေရန်
CMYK color ဖြစ်နေရန်
ဒီဇိုင်းတွင်ပါဝင်သောပုံများ၊စာသားများကိုအနားများဖြတ်​တောက်ရာတွင်မပါသွားစေရန်အနည်းဆုံး 0.125 လက်မဖြတ်စချန်ထားရန်နှင့် အဖြူရောင်ဒီဇိုင်းဖြစ်နေပါက Bleed line ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အရေးကြီးသောပုံများစာများအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်မတော်တဆမပါသွားစေရန်ဖြတ်တောက်သည့်လိုင်းမှအနည်းဆုံး 0.25 လက်မခွါထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Print Preview PDF သည် Color တိကျမှန်ကန်စေဖို့အတွက်စိတ်ချဖွယ်ကောင်းသောတိုငးတာသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ဖိုင်ထဲတွင်ပါဝင်သောကာလာများသည် Monitor Calibration, Screen Resolution နှင့်အခန်းအလင်းအမှောင်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်ပါသည်။ Pantone color များသည်လည်း CMYK သို့ပြောင်းလဲရာတွင်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
Digital printing နှင့် Offset Printing များဖြင့်ပုံနှိပ်ရာတွင်အရောင်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်တိကျသော Color Model နှင့် Percentage များအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ပုံနှိပ်မည့်ဖိုင်များအတွက် CMYK mode ဖြစ်နေစေရန်အတွက်သေချာစွာစစ်ဆေးပေးပါရန်လိုအပ်ပါသည်။
Digital Press & Offsetဖြင့်ပုံနှိပ်မည့်ဒီဇိုင်းအားလုံးသည် 300 dpi
Large Format Printingဖြင့်ပုံနှိပ်မည့်ဒီဇိုင်းအားလုံးသည် 150 dpi
Screen Value အားဖြင့် 133 LPI and 150 LPI ကြား
သုံးစွဲမည့် software အလိုက်တိကျသောဖိုင်လိုအပ်ချက်များအတွက်လိုအပ်ပါက Xenon Online Printing design team နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Digital Press နှင့် Offset Printing အတွက်အရည်အသွေးကောင်းကောင်းပုံထုတ်လိုပါလျင် 300 dpi နှင့်ထုတ်မည့်အရွယ်အစားအတိအကျအတိုင်းဖိုင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖိုင်ကို save လုပ်ရာတွင် PDF format ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး Font များအားလုံး Embed လုပ်ရန်နှင့် Screen Value ကို 133 သို့ 150 LPI ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
Large Format ဖြင့်ပုံနှိပ်မည့် File များအနေဖြင့်အနည်းဆုံး 150 DPI resolution ရှိရန်လိုအပ်ပြီးထုတ်လုပ်မည့်ဆိုဒ်အတိုင်းအတိအကျပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖိုင်ကို PDF, JPEG သို့ TIFF format ဖြင့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ (အကယ်၍ဖိုင်တွင် Layer များပါဝင်ပါက Reference ကြည့်ရန် jpeg file ထည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။)
ပုံနှိပ်မည့်ဖိုင်များနှင့် Template မှပြုပြင်ပြီးဖိုင်များအတွက် Digital proof အနေဖြင့် PDF ဖိုင် download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။အဆိုပါ digital proof မှာ Layout နှင့် Design ဆိုင်ရာများအတွက်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုခြင်းသာဖြစ်ပြီး Color Accuracy အတွက်အာမခံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
Color Accuracy ဖြစ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဆိုပါလျင် Hard Copy Print ထုတ်ကြည့်စေလိုပါသည်။လိုအပ်ပါက Customer Service 09428305555 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
File များ Upload ပြုလုပ်ရန်အတွက် 50MB ထိသတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။အကယ်၍သင်ပို့မည့်ဖိုင်သည် 50MB ထက်ကြီးနေပါက Google Drive မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ WeTransfer ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုလျင် “Artwork ကိုနောက်မှတင်မည်” button ကိုနှိပ်၍ဆက်လုပ်သွားပြီး Shopping Cart စာမျက်နှာရှိအော်ဒါအတွက်အထူးညွှန်ကြားချက်နေရာတွင် WeTransfer Link ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Xenon presents the Premium Online Printing Platform for obtaining personal, promotional, commercial, and informational print products at the best prices!
Xenon Company Limited
09977 666 888